कसरी सजिलैसँग iCloud र गुगल क्यालेन्डरहरू सिंक गर्न आईफोन समाचार
हामी मध्ये धेरैले एप्पल इकोसिस्टम भित्र हाम्रा सबै उपकरणहरू छन् भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि, प्रत्येक र प्रत्येक इन्टरनेट सेवामा गुगलको सर्वव्यापी उपस्थिति भनेको धेरै अवसरहरूमा तपाईंले ती मध्ये एक प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्राय: सोधिने प्रश्नहरू मध्ये एक आईक्लाउड र गुगल क्यालेन्डर क्यालेन्डरहरू कसरी सि sy्ख्रोनाइज गर्ने हो स्वचालित रूपमा, र त्यो हो जुन हामी तपाईंलाई आज वर्णन गर्ने छौं।
यो धेरै अवसरहरूमा एक धेरै सुविधाजनक विकल्प हो, उदाहरणका लागि यदि हामीसँग एन्ड्रोइड स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट छ, वा यदि काममा हामी गुगल क्यालेन्डर प्रयोग गर्न "बाध्य" छौं। अनुप्रयोगहरू खोज्नको लागि घण्टा वा पैसा बर्बाद गर्न आवश्यक पर्दैन जसले हामीलाई यो कार्य गर्नको लागि अनुमति दिन्छ, किनभने स्वदेशी सेवाहरूले आफैं हामीलाई स्वचालित र नि: शुल्क गर्न अनुमति दिन्छ, र त्यो हो जुन हामी तपाईंलाई तल विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नेछौं।
1 दिमागमा राख्नको लागि दुई महत्त्वपूर्ण विवरणहरू
2 १.इक्लाउडबाट साझेदारी गर्नुहोस्
3 २. यसलाई Google क्यालेन्डरमा आयात गर्नुहोस्
दिमागमा राख्नको लागि दुई महत्त्वपूर्ण विवरणहरू
यी पात्रोहरू सि sy्ख्रोनाइज गर्न हामीले दुईवटा सानो असुविधाहरू स्वीकार्नुपर्दछ। पहिलो त्यो हो हामीले आईक्लाउड क्यालेन्डर सार्वजनिक रूपमा साझेदारी गर्नुपर्नेछ हामी सि sy्क गर्न चाहन्छौं जुन केही केसहरूमा ठूलो दोष हुन सक्दछ (मेरो होइन)। यसको मतलब त्यो हो कि जो कोहीसँग उत्पन्न लिंक छ क्यालेन्डर पहुँच गर्न सक्दछ, तर लिंक पाउन सजिलो छैन।
दोस्रो दोष यो हो कि सिन्क्रोनाइजेसन मात्र एक मात्र मार्ग हो, आईक्लाउडबाट गुगलमा, त्यो हो गुगल क्यालेन्डरबाट तपाईं यी क्यालेन्डरहरूको कुनै पनि कुरा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्न। असुविधा भन्दा बढि मेरो केसमा यो एक फाइदा हो तर यदि तपाईलाई यो चाहिन्छैन भने हामीले प्रस्तुत गरेको विकल्पले तपाईको लागि काम गर्दैन।
१.इक्लाउडबाट साझेदारी गर्नुहोस्
पहिलो चरण भनेको तपाईको आईक्लाउड खाताबाट क्यालेन्डर साझा गर्नु हो। यसको लागी कम्प्युटर ब्राउजरबाट हामी आईक्लाउड.कट पहुँच गर्दछौं र क्यालेन्डर विकल्प भित्रबाट हामी चारवटा छालहरूको आइकनमा क्लिक गर्दछौं (जस्तै वाइफाइ प्रतिमा) साझा विकल्पहरू ल्याउनका लागि। हामीले सार्वजनिक क्यालेन्डर विकल्प सक्रिय गर्नुपर्नेछ, र यसको मुनि देखिने लिंक प्रतिलिपि गर्नुपर्नेछ।
२. यसलाई Google क्यालेन्डरमा आयात गर्नुहोस्
अब हामीले कम्प्युटरको ब्राउजरबाट गुगल क्यालेन्डर पहुँच गर्नुपर्छ, र मुख्य स्क्रिन भित्र URL बाट क्यालेन्डर जोड्नुहोस्स्क्रिनशटमा संकेत गरे अनुसार।
सम्बन्धित फिल्ड भित्र हामी URL ठेगाना टाँस्यौं जुन हामीले पहिले प्रतिलिपि गर्थ्यौं, तर गुगलमा थप्नु अघि केहि गर्नुपर्दछ। हामीले "वेबकैल" क्यालेन्डरको पहिलो भागलाई "HTTP" मा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यो स्क्रिनशटमा देखा पर्दछ। एकचोटि यो काम सकिएपछि, हामी "पात्रो थप्नुहोस्" मा क्लिक गर्न सक्दछौं ताकि यो गुगल क्यालेन्डरमा देखा पर्नेछ।
यो अपरेशन हामी अधिक आई-क्लाउड क्यालेन्डरहरूसँग हामीलाई यति पटक दोहोर्याउन सक्छौं। गुगल क्यालेन्डरमा प्रत्येक क्यालेन्डरको विकल्पहरूमा हामी नाम, रंग, आदि परिवर्तन गर्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी iCloud र गुगल क्यालेन्डरहरू सजिलै समन्वयन गर्न
नमस्कार, मैले चरणहरू अनुसरण गरेको छु र क्यालेन्डरको पीसी संस्करणमा मैले मोबाइलमा गरेको परिवर्तनहरू अपडेट हुँदैनन्। यदि यो सत्य हो कि यसले प्रारम्भिक रूपमा मलाई मोबाइलको घटनाहरू ल्याउँछ, तर एक पटक क्यालेन्डर सिर्जना भए पछि, अपडेट आईफोन => पीसी गइदैन, तर यदि अन्य तरिकाले, त्यो हो, पीसी मोबाइलमा (वास्तवमा, यो हो तात्कालिक हो)
के असफल हुन सक्छ ???
नमस्ते लुइस, पोष्टका लागि धन्यबाद। एक पटक मैले मेरो कम्प्युटरमा साझा iCloud क्यालेन्डर सिंक गरेपछि, म त्यो क्यालेन्डरमा अपडेटहरू देख्न सक्दिन। यो यो हो कि घटनाहरू त्यस क्षण सम्ममा सिnch्ख्रोनाइज्ड भए र त्यहाँ त्यहाँ फेरि कुनै सिnch्क्रोनाइजेसनहरू छैनन्। कुनै सुझाव?
ठिक छ, मलाई थाहा छैन ... चरणहरू जाँच गर्नुहोस् किनकि यसले मलाई अपडेट गर्दछ
म एन्ड्रेस जस्तै छु, र मैले यो हजार पटक गरेको छु। के मैले आईफोनमा राखेको छु, अब गुगल क्यालेन्डरमा देखा पर्दैन
यो उस्तै उस्तै हुन्छ।
धेरै धेरै धन्यवाद !!! तपाईको सल्लाहको साथ धेरै खोज पछि म यो एक क्षणमा गरेको छु .... बधाई छ
मैले यो धेरै पटक गरेको छु र घटनाहरू जुन मैले iCloud क्यालेन्डरमा सिर्जना गर्दछ Google क्यालेन्डरमा देखा पर्दैन। केहि परिवर्तन हुन सक्थ्यो?
जेष्ठलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई पनि त्यस्तै भयो। म यी चरणहरू गर्दछु (मैले विभिन्न मोबाईलको साथ प्रयास गरेको छु) र त्यस घण्टासम्म सिर्जना भएका घटनाहरू देखापर्दछन् तर नयाँहरू देखा पर्दैन, न त उनीहरू मलाई चेतावनी दिन्छन् न त मलाई फेरि समक्रमण गर्दछन्। यस्तो लाग्छ कि जानकारी पहिले नै छ तर नयाँले यसलाई अपडेट गर्दैन। कसैलाई कुनै अन्य विधि थाहा छ? म केवल यस क्यालेन्डर बकवासका लागि आईफोन खरीद गर्न अस्वीकार गर्दछु, वाह। तर मलाई श्रम मुद्दाहरूको लागि यो आवश्यक छ !!
इगो इटुरमेन्डी भन्यो
के दक्षता! धन्यवाद, लुइस।
Iigo Iturmendi लाई जवाफ दिनुहोस्
रिकार्डो गालाचे भन्यो
उत्तम मैले कुनै अन्य लिंकमा जानकारी फेला पारेन।
रिकार्डो गालाचेलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो पोष्ट। योगदानका लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
डानियल डुआर्ते भन्यो
धन्यवाद! उपयोगी, स्पष्ट र संक्षिप्त
डेनियल डुआर्टलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मैले क्यालेन्डरहरू सि sy्क्रोनाइज गरें, तर जब मैले iCloud क्यालेन्डरमा नयाँ रिमाइन्डर थपे, यो gmail पात्रोमा अपडेट हुँदैन।
अम्फीलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले सिnch्क्रोनाइजेसन गरें ताकि गुगल क्यालेन्डरमा एप्पल क्यालेन्डरका घटनाहरू देख्न सकून्। के तिनीहरू भविष्यमा स्वचालित रूपमा सि ?्क हुन्छन् वा प्रत्येक पटक गुगल क्यालेन्डरमा नयाँ घटना सिर्जना हुने बित्तिकै मैले यो गर्नु पर्छ?
टाइल खेल, यो धेरै प्रतिरोधात्मक र सुरुचिपूर्ण ट्रैकरको विश्लेषण